Budata WhatsApp Plus n'efu, tinye atụmatụ ndị ọzọ! | Gam akporosis
Whatsapp gbakwunyere bụ mgbanwe nke kpochapụwo WhatsApp ngwa nke ga-enye anyị ohere ịhazi ya na nwee ọrụ ndi ozo Na ngwa WhatsApp anyị, ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta ọtụtụ ndị ahịa kachasị ama ngwa ngwa na mbara ala. Anyị nwere ike ịghọta WhatsApp Plus dị ka "mod", ya bụ, ngwa etinyerela iji nye anyị ohere inwe ọtụtụ ọrụ na mmezi ka ukwuu, nke ndị ọkachamara kọmpụta rụrụ iji mee ọtụtụ ngwa ndị nwere oke oke. .
Ka ọ dị ugbu a, WhatsApp Plus dị n'ụzọ zuru oke n'agbanyeghị nrụgide nke ndị okike WhatsApp gbalịrị iwepu "mod" a na sava niile na-ebudata. N'ihi nke a ụdị nke Whatsapp Anyị nwere ike ịhazi ụzọ ndị ọzọ si ahụ anyị jikọọ, nwee ọtụtụ mkparịta ụka mepere n'otu oge, yana gbanwee karịa ebe akara ngosi ọ bụla pụtara na ngwa ahụ.
1 Etu esi ebudata WhatsApp Plus n'efu
2 Etu esi etinye WhatsApp Plus ReBorn
3 Ebe ibudata ihe kacha ọhụrụ nke WhatsApp Plus
4 WhatsApp Plus Holo na WhatsApp Plus Jimods
Etu esi ebudata WhatsApp Plus n'efu
Installwụnye WhatsApp Plus dị mfe na n'ime iru onye ọ bụla. Nke mbụ, anyị ga-ekwupụta na WhatsApp Plus dị na ngwaọrụ gam akporo, maka ngwaọrụ iPhone ọ dị mkpa ka Jailbreak rụọ ya na nsụgharị nke WhatsApp Plus anaghị akwụsi ike, nke nwere ike iduga igbochi akaụntụ ahụ, yabụ anyị agaje ikuziri gi wụnye WhatsApp Plus maka gam akporo.
Tupu budata WhatsApp Plus n'efu ma wụnye ya, nke mbụ, anyị ga-eme nnomi ndabere nke mkparịta ụka WhatsApp niile, maka nke a anyị ga-aga: Ntọala WhatsApp> Ntọala Nkata> Chekwa Mkparịta ụka. Ozugbo echekwara, anyị ga-aga n'ihu iwepụ ngwa ahụ.
Anyị ebudatara .APK nke WhatsApp Plus na Spanish site na-esote njikọ.
Etu esi etinye WhatsApp Plus ReBorn
Ozugbo ebudatara, anyị na-aga na ngalaba nbudata nke ngwaọrụ gam akporo anyị wee gaa n'ihu nwụnye. Mgbe arụnyere ya, anyị ga-aga n'ihu ịbanye nọmba ekwentị anyị, na-agbaso otu usoro ahụ oge ọ bụla anyị wụnye ụdị nke WhatsApp.
Anyị ga-echere oge ole na ole maka nkwado nke mkparịta ụka nke anyị mere mechara na otu n'ime usoro izizi iji weghachite. Anyị ga-ahụ ọrụ ọhụrụ na-akpaghị aka n'elu aka nri, na akara ngosi WhatsApp ọhụrụ ya na akara ngosi "+" di n'etiti.
Ebe ibudata ihe kacha ọhụrụ nke WhatsApp Plus
WhatsApp Plus ReBorn ga-elele maka mmelite ma melite na akpaghị aka, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata ụdị ọhụụ ya, ịnwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na LINK a budata WhatsApp Plus ma budata ya ozugbo iji wụnye ya na usoro ndị a dị n'elu.
WhatsApp Plus Holo na WhatsApp Plus Jimods
Na 2014 na Mgbanwe ihu ọchị nke WhatsApp Plus, bụ ụdị nke WhatsApp Plus nke na-enye gị ohere ịwụnye gam akporo Holo interface, agbanyeghị, a kwụsịrị ụdị a n'etiti 2015 n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ngwaọrụ gam akporo ejirila interface a.
Otú ọ dị, anyị na-ahụkwa ụdị a ma ama WhatsApp Plus Jimods, ụdị kachasị mma na nke ahụ na-enye gị ohere izochi ọkwa dị na WhatsApp kpamkpam, nbudata ya dị mfe. Iji wụnye ya ị ga-ewepụ ọ bụla ukara ma ọ bụ gbanwetụrụ ụdị nke WhatsApp site na ngwaọrụ na gaba iji wụnye a .apk ozugbo na ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị, otú ị pụrụ ọbụna iji ya na- wụnye WhatsApp na mbadamba.